अर्थ समचार – Nepal Online Khabar
Feb272021 by Nepal KhabarNo Comments
Posted in अर्थ समचार
राजनीतिक रूपमा दुई समूहमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एउटै दलका रूपमा छ। नयाँ सरकार गठन गर्न नेकपाका दुवै समूह निर्णायक भूमिकामा रहनेछन्। संसद् पुनर्स्थापनासँगै सत्ता समीकरण कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा दुवै समूहबाट विभिन्न तरिकाका कसरत भइरहेका छन्। कानुनी रूपमा फुटिनसकेकाले सत्ता समीकरणलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कठिनाइले दुवै समूहलाई पिरोलेको छ। नेकपा दाहाल–नेपाल समूह खुला रूपमा सत्ता समीकरणका लागि प्रयासरत छ भने ओली समूहले गुप्त रूपमा रणनीति तय गरिरहेको छ। दाहाल–नेपालको बिहीबार दिनभरिको कसरत हेर्दा नेकपाभित्र पुनः एकता हुनुपर्ने, एकता हुन नसके दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएर मात्र निकास निस्कने अवस्था देखिएको छ। वर्तमान अवस्थामा ओली समूहले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु-याए पनि केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पु¥याउन नसक्ने भएका कारण पार्टी विभाजन गर्न अ
Aug212020 by Nepal KhabarNo Comments
काठमाडौं : सरकारले को'रोना भा'इरस (को'भिड—१९) नियन्त्रणका लागि साउन मसान्तसम्मको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ/सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो । विवरण अुनसार को'रोना नि'यन्त्रण तथा रोकथामका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट ५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायबाट २ अर्ब १७ करोड, रक्षा मन्त्रालयबाट २ अर्ब ३७ करोड, गृह मन्त्रालयबाट २० करोड ८३ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ६ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ४ करोड ४९ लाख र सहरी विकास मन्त्रालयबाट १ करोड २९ लाख रकम खर्च भएको छ । को'भिड कोषबाट यस्तै १ अर्ब ३ करोड विभिन्न निकायलाई दिइएको छ । यस्तै प्रदेशहरुबाट झ
Aug52020 by Nepal KhabarNo Comments
सुनको भाउ अहिले सम्म कै उच्च १ तोला सुन एक लाख एक हजार ४ सयमा कारो-बार…हेर्नुहोस् ।
काठमाण्डाै : सुनको भा'उ तो'लाको एक लाख रुपैयाँ ना'घेको छ । आज एकैदिन तो'लामा १६ सय रुपैयाँ बढेर सुनको भाउ तोला'को एक लाख एक हजार ४ सय रुपैयाँ निर्धा'रण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यव'सायी महा'संघले जनाएको छ । महा'संघ अन्त'र्गतको भाउ निर्धा'रण समितिका सं'योजक तेज'रत्न शाक्यका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुनको भाउ प्रति औंस ४० डलरले बढेको छ । यस्तै हिजो र अ'स्ति स्थिर रहेको चाँदीको भाउ आज तोलामा ६५ रुपैयाँ बढेको छ । चाँ'दी आज तोलाको १२ सय ९५ रुपैयाँ नि'र्धारण गरिएको महासं'घले जनाएको छ । अन्त'र्राष्ट्रिय बजारमा सुनमा लगा'नीकर्ता बढेका, सुनको उत्पादनमा कमी आएको, ठूला देशबीच द्व’न्द्व बढेको तथा कोरो'ना सङ्क्र'मणका कारण अ’स्थिरता बढेकाले सुनको भाउ नि'रन्तर बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।यस्तै अन्त'र्राष्ट्रिय भाउमा नै भर पर्नुपर्दा नेपालमा सुनको भाउ म'हंगो भएको हो ।
Jul232020 by Nepal KhabarNo Comments
किसानका नाममा सीमित व्यक्ति र समूह मालामाल, परामर्शमै सकियो १० अर्ब…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौं : कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअ'न्तर्गतका ११ आयोजनाले परा'मर्श सेवामा पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षमा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ सकेका छन्। किसानका नाममा सीमित व्यक्ति–समूह मालामाल भएको यसले देखाएको छ। यी आयोजना किसानको उन्नति र खाद्य तथा पशुपन्छी उत्पादनमा आ'त्मनिर्भरताका नाममा वैदेशिक दा'तृ निकाय र सरकारको खर्चमा सञ्चालनमा छन्। परा'मर्श सेवाका नाममा कुल बजेटको १ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म ख'र्च गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो विषयलाई गम्भीर भनेको छ। आ'ईफ्याडको सहयोगमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना र किसानको लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम सञ्चालित छन्। विश्व बैंकको सहयोगमा जलवायु प्र'कोप समुत्थान नि'र्माण आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना ९प्याक्ट०, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना छन्।
काठमाडौं : एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण गर्न नेपाललाई दिने सहायता बढाउने तयारी गरेको छ। भर्खरै २५करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता सम्झौता गरेको एडीबीले अनुदान सहायता थप्ने भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार एडीबीले ४८ लाख ९० हजार डलर अनुदान सहायता दिने तयारी गरेको छ। यसमध्ये १८ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर कोभिड–१९ को उपचारार्थ आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्न प्रयोग गरिनेछ। प्राविधिक सहायताअन्तर्गत उपलब्ध हुने यो सहायता मंगलबारको विनिमय दरअनुसार २२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबर हो। त्यसबाहेक ३० लाख अमेरिकी डलर प्रकोप नियन्त्रणका लागि दिने भनिएको छ। मंगलबारको दरमा यो ३६ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हो। एसिया प्यासिफिक डिजास्टर रेस्पोन्स फन्ड शीर्षकअन्तर्गको यस्तो सहायता प्रकोप न्यूनीकरणका लागि दिने गरेको छ। यो रकम सरकारले कोरोना महामारी जोखिम न्यूनीकरणमा खर्च
Jun292020 by Nepal KhabarNo Comments
काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाको लकडाउन खुकुलो पारेपछि आर्थिक वृ'द्धिदर बढ्दै गएको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको १७ औं बार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले अत्यन्तै बढी आर्थिक क्रि'याकलापहरु हुने पछिल्ला ५ महिनामा लक'डाउन गर्नु परेकाले अर्थिक वृद्धि'दर घटेको तर लक'डाउन खुकुलो पारेपछि अर्थिक बृ'द्धिदरले ट्रयाक लिदै गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘सार्वजनिक निर्माण र व्यापार उच्च हुने समयमा को'रोना भाइर'सको महामा'रीका कारण नेपालको आर्थिक स्थिति संकु'चित हुँदा कुनै क्षेत्रमा नका'रात्मक असर समेत पर्यो तर लकडाउन खुकुलो पारिदै आपछि अहिले आर्थिक वृ'द्धिदर बढ्दै छ । उहाँले पहिलो प्राथमिकतामा अन्त'र्राष्ट्रिय व्यापार बृद्धि भएको बताउनुभएको छ । पूर्ण लकडाउनका बेला नर्मल अवस्थामा हुे गरेकाे ब्यापारकाे मासिक २० प्रतिशत ब्यापार हुने गरेकोमा
Jun172020 by Nepal KhabarNo Comments
काठमाडौं : कोरोना भाइसर संक्रमणबाट बच्न सरकारले अघि सारेको बन्दाबन्दी (लकडाउन)का कारण वैशाखमा उपभोग्य वस्तुको आयात घटेको छ। राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वैशाखको समष्टिगत आर्थिक विवरणले यस्तो देखाएको हो। वैशाखमा व्यापारघाटा अघिल्लो वर्षभन्दा १४.२० प्रतिशत घटेर ९ खर्ब ४३ अर्ब ७ करोडमा झरेको बताएको छ। गत वर्ष वैशाखमा व्यापारघाटा १९.७० प्रतिशत बढोत्तरी भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ पछि यो वर्ष पहिलोपटक व्यापार घाटाको विस्तार ऋणात्मक भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मुलुकले जम्मा १० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षकोभन्दा १३ प्रतिशत कम हो। भारतबाट हुने आयात त १७.५ प्रतिशत घटेको छ। यसबीच पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन र तिनका पार्टपुर्जा, छडलगायत फलामका सामान उत्पादन गर्ने एमएस बिलेट, सुन, सिमेन्टजस्ता वस्तुको आयात घटेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। लक